Carbon fibre tsara indrindra UAV Rack-Hydrogen Energy Manufacturer sy Factory | Wanhoo
(1) velarana kodiarana 280, ny boom dia mandray tabilao fibre karbaona 3.0mm matevina, ary ny hatevin'ny fuselage dia takelaka fibre karbaona 1.5mm, izay miantoka ny tanjaky ny fiaramanidina amin'ny sidina ary mampihena ny hovitrovitra tsara;
(2) Ny endriny tsy misy olona manontolo dia vita amin'ny takelaka fibre karbaona madio, izay maivana ary ny milina foana iray dia milanja 135g (ao anatin'izany ireo kojakoja UAV toy ny tsanganana alim-by bolt), izay kely ny habeny ary lava ny halavany fiainana fanompoana
(3) Ny fuselage dia mifandray amin'ny tsanganana alimo aluminium, izay mora novaina, ary azo antoka ny tanjaky ny fiaramanidina.
Fiainana lava: ny fibre karbonika dia manana ny mampiavaka ny lanjan'ny hazavana maivana, ary ny lanjan'ilay fefy karbaona UAV dia maivana be, ary ny fotoana fiaretana dia lava kokoa noho ny UAV hafa;
Fahamafisana matanjaka: ny tanjaky ny fibre karbonika dia mihoatra ny 3500mp, ary manana toetra matanjaka avo. Ny fibre karbaona UAV dia manana fanoherana mahery vaika amin'ny fahalavoana sy amin'ny fahaizany mamikitra;
Mora ny manangona sy mamongotra: ny firafitry ny vatan-kazo tsy misy tariby miaraka amin'ny rotor karbonika marobe dia tsotra, ary vita amin'ny tsanganana alimina sy ny fifandraisana misy azy, izay mahatonga ny fandaminana tena mety amin'ny dingan'ny fametrahana ny singa; Azo atambatra amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra izy io, ary mora entina; Tena mety ny mampiasa; Ary ny tsanganana alimina fiaramanidina sy ny bolt no ampiasaina, izay manana fihenjanana matanjaka.
Milamina tsara: ny sehatry ny fibre karbaona maro an'ny rotor UAV vita amin'ny fibre karbonika dia misy ny vokatry ny fitrohana ny fahatairana sy ny fitoniana, ary ny fitaoman'ny vatana mihozongozona na ny hozongozona dia entin'ny sehatra. Ny fampifangaroana tsara ny baolina mpitroka tampoka sy ny lozan'ny plateforme dia afaka mampitombo ny fahamarinan-toerana ary mampihena ny fitrohana ny hatairana, ary manidina tsara amin'ny rivotra;
Fiarovana: noho ny hery miparitaka amin'ny sandry maro, ny fibre karbaona multi rotor UAV dia afaka miantoka fiarovana avo lenta; Amin'ny sidina dia afaka mandanjalanja ny hery, mora fehezina, mandeha ho azy, manao azy manidina araka ny lalana tadiavina, ary misoroka ny fidinana tampoka ka miteraka fahasimbana.
afaka manampy amin'ny fanaovana ny endrika izy rehetra, azo alamina mifanaraka amin'ny zavatra takinao
Ny orinasantsika dia tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso kalitao sy ny fizahana ny rohy famokarana tsirairay avy amin'ny mpiasa fanaraha-maso kalitao 6. Ny fifamatorana ara-nofo, ny lovia manery, ny famolavolana marina, ny fanodinana CNC, ny fizahana ny vokatra vita ary ny fonosana dia miaraka amina mpiasa mifehy mifanaraka amin'izany hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa tsirairay.
Manaraka: Kitapo bateria fibre karbonika